လက်မထပ်ခင် အပျိုစင်ဘဝကို ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့… – Messi Club
လက်မထပ်ခင် အပျိုစင်ဘဝကို ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့…
အ စဆုံးဖတ်ပြီး နှမချင်း ကိုယ်ချင်းစာတယ်ဆိုရင် မျှဝေပေးပါ …။
“ဟင့်အင်း မောင်” မလိုက်လျော ပါရစေနဲ့ ”မောင်” ချစ်ကလည်းကွာ….”မောင်က ချစ်ကို တကယ်ချစ်တာပါ ကွာ..”“ဟင့်အင်း မောင်” ကျမတို့ မိန်းမသား ဘဝမှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ အပျိုစင် ဘဝလေးကိုတော့
လက်မထပ်ရသေးပဲ မပေးဆပ်ပရစေနဲ့လား “မောင်”..တသက်လုံး တန်ဖိုးထားတဲ့ အပျိုစင် ဘဝလေးကိုတော့ မလိုချ င်ပါနဲ့အုံး နော်..မောင်…”
”တောက်စ်..” မင်း ငါ့ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ ဒါလားကွာ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ပြီး မင်း ငါ့ အပေါ် ဒီလောက်တောင် မလိုက်လျော ပေးနိုင်ဘူးလားမင်း ငါ့ အပေါ် တကယ်ချစ်တာရော ဟုတ်ရဲ့လားTalky တွေကို ကြည့်ထားနော် ရှုပ်နေတယ်/
“မောင် ရယ်” ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလည်း မောင့်ကို မချစ်ပဲ နေပါ့မလား မောင့်ကို အရမ်းချစ်တာပေါ့စိတ်မဆိုးပါနဲ့ မောင်ရယ် မောင်စိတ်ဆိုးရင် ကျမ မနေတတ်လို့ပါနော် …
ကျမ ”မောင့်” ကို တကယ်ချစ်တယ် ဆိုတာကို မောင် ယုံကြည်အောင် ဘယ်လို သက်သေ ပြရမှလည်း ပြော” ငါ စိတ်ဆိုးတာ မမြင်စေချင်ရင်”ငါတောင်းဆိုတာ လေးကို လိုက်လျောပေးလေ အများကြီး တောင်းဆိုနေတာလည်း မဟုတ်ဘူး”ဒီ တစ်ခါ ထဲ့ပါပဲကွာ”“ချစ်” မောင့်အပေါ် ဘယ်လောက်တိ ချစ်လဲ ဆိုတာကို “ချစ်” အပျိုစင် ဘဝနဲ့ မောင့်အပေါ် သက်သေပြလေ …
“ဟူး……မောင်ရယ်” ချစ်ကလည်းကွာ သက်ပြင်းတွေ ချမနေပါနဲ့
“ဘာဖြစ်ဖြစ် မောင်တာဝန် ယူတယ်ကွာနော် ”
မောင့် ဆန္ဒ ကို လိုက်လျော ပေးလိုက်လို့ မောင့်အလိုကို လိုက်ပေး လိုက်ရလို့
“ချစ် ဘယ်တော့မှ နောင်တ မရစေရဘူး နော်””ကတိကွာ…ကတိ ” အင်းပါ မောင်ရယ် …။
ချစ် တစ်ခုခု ဖြစ်ရင် မောင်တာဝန် ယူရမယ်နော်ချစ်ကို ပစ်မသွားရဘူး နော်မယူရသေးခင်မှာ အခု လို လိုက်လျောပြီး ချစ်ရဲ့ အပျိုစင် ဘဝကို မောင့်လက်ထဲ ထိုးအပ်လိုက်တယ် ဆိုတာ ကလည်း”မောင့်ကို ချစ်လွန်းလို့ မောင့်ကို ယုံကြည်လွန်းလို့ပါ…”
“စိတ်ချပါကွာ..” လုပ်ပြီးရင် တာဝန်ယူရဲတဲ့ စိတ် မောင့်ဆီမှာ အပြည့်ရှိပါတယ်[အဲ့ဒီ အချိန်မှာ ယောကျာ်း ပီသချက်ကတော့]ဗန္ဓုလ နဲ့ အလောင်းဘုရားတောင် လက်မိုက် ချသွားနိုင်တယ်လိုချင်တာ ရသွားတာကိုး …။
“……… လ အနည်းငယ် ခန့်ကြာသော်”
မောင် ဘာလို့ ချစ်ဆီကို အရင်လို ဖုန်းမဆက်တော့ တာလည်း
မောင် ဘာလို့ ချစ်က တွေရအောင်ပြောရင် ရှောင်ဖယ်နေရတာလည်း“အလုပ်တွေ များနေလို့ ပါကွာ….”
ဒါဆို ဘာလို့ အရင်ကနဲ့ မတူတော့ပဲ မောင် အေးတီ အေးစပ် ပုံစံနဲ့ ကျမကို ဆက်ဆံနေတာလည်း
“ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး ကွာ….”
မောင်ပြောတော့ ကျမကို လပ်ထပ်မယ်ဆိုအခု လက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ယောင်ပြီးတော့တောင် မောင့်ပါးစပ်က မထွက်တော့ပါလားဒီလို အခြေနေမှာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး လက်ထပ်ကြမှာလည်း” မင်းတို့ မိန်းမတွေက အတူတူ နေရဖို့လောက်ပဲ သိတာ”ယူပြီးရင် နွားလို ရှာကျွေးရမှာက ငါတို့ ယောကျာ်းတွေကွ …။
(လိုချင်တာကို တောင်းနေတုန်းက ဒီလေသံ ဒီအခွက် မဟုတ်ပါဘူး)
“တောက်စ်”…မင်းအခု ဘာဖြစ်ချင်နေတာလည်း ….
“လမ်းခွဲ ချင်နေတာလား ပြတ်ချင်နေတာလား..”
” အော်…မောင်ရယ် ခုကျတော့ ဒီစကားမျိုး ပြောထွက်ပြီပေါ့..”
“အင်းပါ”…မောင်အဆင်ပြေချိန် လက်ထပ်ပါ …
(စိတ်ထဲ့ကနေ ဒီမသာ ငါကို လက်ထပ်ပါစေ လို့ပဲ ဆုတောင်းနေယုံကလွဲပြီး ကျန်တာဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး)
ကိုယ့် ခန္ဓာ ကို ပေးမှ ကိုယ့်ကို ချစ်မယ် ဆိုတဲ့ ယောကျာ်း မျိုးနဲ့ ဝေးဝေးရှောင်ပါ…ဆစ်တို့ရော့ Sex ရော့ Love ဆိုပြီးတော့လည်း ကိုယ့်အပျိုစင်ဘဝကို ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း ဘယ်သောခါမှ ပြန်မသတ်မိပါစေနဲ့ …။
ကိုယ်ဟာ မိန်းမသား ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့အပျိုစင်ဘဝကို လက်မထပ်ရသေးပဲ့ ကိုယ့်ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ပြီး ခစားတဲ့ ယောကျာ်း ဖြစ်နေရင်တောင်မှ မထိုးကျွေးမိပါစေနဲ့ …။
ခန္ဓာ ကိုယ်ရမှ ချစ်မယ်ဆိုတဲ့ ယောကျာ်းမျိုးနဲ့ တွေ့တဲ့အခါချစ်သူဘဝ မရောက်ခင် ရည်းစား ဘဝမှာတင် လှည့်ပြန်ခဲ့ကြပါလိုချင်တာ မရလို့ တကယ်မချစ်လို့လား…?မင်းက ငါ့ကို မယုံကြည်လို့လား….?…
ဆိုတဲ့ Talky တွေနဲ့ ချုပ်တာကို ခံရတဲ့ အခါ စီးထားတဲ့ ဖိနပ်နဲ့ မျက်ခွက် ကို ဆယ်ချက်လောက် ရဲရဲကြီး ရိုက်ပြပြီး နောက်ဆန်မတင်ပဲ့ လှည့်ပြန်လာခဲ့ လိုက်စမ်းပါ …။
အဲ့လိုကောင်းမျိုးတွေက ဘယ်တော့မှ အတည် မယူဘူးအေပျာ်ပဲ ထားတတ်တာ …။
မြဲမြဲမှတ်ထား မသေ မချင်း မှတ်ထားကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ ယောကျာ်းက သူ့ကြောင့် ဘယ်သောခါမှ ကိုယ့်တန်ဖိုးကို လျော့ကျအောင် မလုပ်ဘူးကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ ယောကျာ်းက သူ့လက်ထဲ့မှာ ရှိတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက် တန်ဖိုးကို အမြဲ မြင့်တင်ပေးတယ် …။
ဒီစာဟာ မိန်းမဖက်က လိုက်ရေးခြင်း မဟုတ်ပါယာကျာ်း အားလုံးကို စော်ကားရခြင်းလည်း မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေသော့ ခေတ်ကို ထင်ဟတ်စေရန် အတွက်သာ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် …။
အားလုးံကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် …။ ။
credit to orginal
အ စဆုံးဖတျပွီး နှမခငျြး ကိုယျခငျြးစာတယျဆိုရငျ မြှဝပေေးပါ …။
“ဟငျ့အငျး မောငျ” မလိုကျလြော ပါရစနေဲ့ ”မောငျ” ခဈြကလညျးကှာ….”မောငျက ခဈြကို တကယျခဈြတာပါ ကှာ..”“ဟငျ့အငျး မောငျ” ကမြတို့ မိနျးမသား ဘဝမှာ အရေးကွီးဆုံးဖွဈတဲ့ အပြိုစငျ ဘဝလေးကိုတော့
လကျမထပျရသေးပဲ မပေးဆပျပရစနေဲ့လား “မောငျ”..တသကျလုံး တနျဖိုးထားတဲ့ အပြိုစငျ ဘဝလေးကိုတော့ မလိုခြ ငျပါနဲ့အုံး နျော..မောငျ…”
”တောကျဈ..” မငျး ငါ့ကို ခဈြတယျဆိုတာ ဒါလားကှာ ခဈြသူတှေ ဖွဈပွီး မငျး ငါ့ အပျေါ ဒီလောကျတောငျ မလိုကျလြော ပေးနိုငျဘူးလားမငျး ငါ့ အပျေါ တကယျခဈြတာရော ဟုတျရဲ့လားTalky တှကေို ကွညျ့ထားနျော ရှုပျနတေယျ/
“မောငျ ရယျ” ဘယျလိုပွောလိုကျတာလညျး မောငျ့ကို မခဈြပဲ နပေါ့မလား မောငျ့ကို အရမျးခဈြတာပေါ့စိတျမဆိုးပါနဲ့ မောငျရယျ မောငျစိတျဆိုးရငျ ကမြ မနတေတျလို့ပါနျော …
ကမြ ”မောငျ့” ကို တကယျခဈြတယျ ဆိုတာကို မောငျ ယုံကွညျအောငျ ဘယျလို သကျသေ ပွရမှလညျး ပွော” ငါ စိတျဆိုးတာ မမွငျစခေငျြရငျ”ငါတောငျးဆိုတာ လေးကို လိုကျလြောပေးလေ အမြားကွီး တောငျးဆိုနတောလညျး မဟုတျဘူး”ဒီ တဈခါ ထဲ့ပါပဲကှာ”“ခဈြ” မောငျ့အပျေါ ဘယျလောကျတိ ခဈြလဲ ဆိုတာကို “ခဈြ” အပြိုစငျ ဘဝနဲ့ မောငျ့အပျေါ သကျသပွေလေ …
“ဟူး……မောငျရယျ” ခဈြကလညျးကှာ သကျပွငျးတှေ ခမြနပေါနဲ့
“ဘာဖွဈဖွဈ မောငျတာဝနျ ယူတယျကှာနျော ”
မောငျ့ ဆန်ဒ ကို လိုကျလြော ပေးလိုကျလို့ မောငျ့အလိုကို လိုကျပေး လိုကျရလို့
“ခဈြ ဘယျတော့မှ နောငျတ မရစရေဘူး နျော””ကတိကှာ…ကတိ ” အငျးပါ မောငျရယျ …။
ခဈြ တဈခုခု ဖွဈရငျ မောငျတာဝနျ ယူရမယျနျောခဈြကို ပဈမသှားရဘူး နျောမယူရသေးခငျမှာ အခု လို လိုကျလြောပွီး ခဈြရဲ့ အပြိုစငျ ဘဝကို မောငျ့လကျထဲ ထိုးအပျလိုကျတယျ ဆိုတာ ကလညျး”မောငျ့ကို ခဈြလှနျးလို့ မောငျ့ကို ယုံကွညျလှနျးလို့ပါ…”
“စိတျခပြါကှာ..” လုပျပွီးရငျ တာဝနျယူရဲတဲ့ စိတျ မောငျ့ဆီမှာ အပွညျ့ရှိပါတယျ[အဲ့ဒီ အခြိနျမှာ ယောကျြား ပီသခကျြကတော့]ဗန်ဓုလ နဲ့ အလောငျးဘုရားတောငျ လကျမိုကျ ခသြှားနိုငျတယျလိုခငျြတာ ရသှားတာကိုး …။
“……… လ အနညျးငယျ ခနျ့ကွာသျော”
မောငျ ဘာလို့ ခဈြဆီကို အရငျလို ဖုနျးမဆကျတော့ တာလညျး
မောငျ ဘာလို့ ခဈြက တှရေအောငျပွောရငျ ရှောငျဖယျနရေတာလညျး“အလုပျတှေ မြားနလေို့ ပါကှာ….”
ဒါဆို ဘာလို့ အရငျကနဲ့ မတူတော့ပဲ မောငျ အေးတီ အေးစပျ ပုံစံနဲ့ ကမြကို ဆကျဆံနတောလညျး
“ဘာမှ မဖွဈပါဘူး ကှာ….”
မောငျပွောတော့ ကမြကို လပျထပျမယျဆိုအခု လကျထပျမယျဆိုတဲ့ စကားကို ယောငျပွီးတော့တောငျ မောငျ့ပါးစပျက မထှကျတော့ပါလားဒီလို အခွနေမှော ဘယျလိုလုပျပွီး လကျထပျကွမှာလညျး” မငျးတို့ မိနျးမတှကေ အတူတူ နရေဖို့လောကျပဲ သိတာ”ယူပွီးရငျ နှားလို ရှာကြှေးရမှာက ငါတို့ ယောကျြားတှကှေ …။
(လိုခငျြတာကို တောငျးနတေုနျးက ဒီလသေံ ဒီအခှကျ မဟုတျပါဘူး)
“တောကျဈ”…မငျးအခု ဘာဖွဈခငျြနတောလညျး ….
“လမျးခှဲ ခငျြနတောလား ပွတျခငျြနတောလား..”
” အျော…မောငျရယျ ခုကတြော့ ဒီစကားမြိုး ပွောထှကျပွီပေါ့..”
“အငျးပါ”…မောငျအဆငျပွခြေိနျ လကျထပျပါ …
(စိတျထဲ့ကနေ ဒီမသာ ငါကို လကျထပျပါစေ လို့ပဲ ဆုတောငျးနယေုံကလှဲပွီး ကနျြတာဘာမှ မတတျနိုငျပါဘူး)
ကိုယျ့ ခန်ဓာ ကို ပေးမှ ကိုယျ့ကို ခဈြမယျ ဆိုတဲ့ ယောကျြား မြိုးနဲ့ ဝေးဝေးရှောငျပါ…ဆဈတို့ရော့ Sex ရော့ Love ဆိုပွီးတော့လညျး ကိုယျ့အပြိုစငျဘဝကို ကိုယျကိုတိုငျလညျး ဘယျသောခါမှ ပွနျမသတျမိပါစနေဲ့ …။
ကိုယျဟာ မိနျးမသား ဖွဈတဲ့အတှကျ ကိုယျ့ရဲ့အပြိုစငျဘဝကို လကျမထပျရသေးပဲ့ ကိုယျ့ရှမှေ့ာ ဒူးထောကျပွီး ခစားတဲ့ ယောကျြား ဖွဈနရေငျတောငျမှ မထိုးကြှေးမိပါစနေဲ့ …။
ခန်ဓာ ကိုယျရမှ ခဈြမယျဆိုတဲ့ ယောကျြားမြိုးနဲ့ တှတေဲ့အခါခဈြသူဘဝ မရောကျခငျ ရညျးစား ဘဝမှာတငျ လှညျ့ပွနျခဲ့ကွပါလိုခငျြတာ မရလို့ တကယျမခဈြလို့လား…?မငျးက ငါ့ကို မယုံကွညျလို့လား….?…
ဆိုတဲ့ Talky တှနေဲ့ ခြုပျတာကို ခံရတဲ့ အခါ စီးထားတဲ့ ဖိနပျနဲ့ မကျြခှကျ ကို ဆယျခကျြလောကျ ရဲရဲကွီး ရိုကျပွပွီး နောကျဆနျမတငျပဲ့ လှညျ့ပွနျလာခဲ့ လိုကျစမျးပါ …။
အဲ့လိုကောငျးမြိုးတှကေ ဘယျတော့မှ အတညျ မယူဘူးအပြျောပဲ ထားတတျတာ …။
မွဲမွဲမှတျထား မသေ မခငျြး မှတျထားကိုယျ့ကို တကယျခဈြတဲ့ ယောကျြားက သူ့ကွောငျ့ ဘယျသောခါမှ ကိုယျ့တနျဖိုးကို လြော့ကအြောငျ မလုပျဘူးကိုယျ့ကို တကယျခဈြတဲ့ ယောကျြားက သူ့လကျထဲ့မှာ ရှိတဲ့ မိနျးကလေး တဈယောကျ တနျဖိုးကို အမွဲ မွငျ့တငျပေးတယျ …။
ဒီစာဟာ မိနျးမဖကျက လိုကျရေးခွငျး မဟုတျပါယာကျြား အားလုံးကို စျောကားရခွငျးလညျး မဟုတျပါဘူးလကျရှိ ဖွဈပကျြနသေော့ ခတျေကို ထငျဟတျစရေနျ အတှကျသာ ရေးသားထားခွငျးဖွဈပါတယျ …။
အားလုးံကို ကြေးဇူးတငျပါတယျနျော …။ ။